पर्सा गोलीकाण्डकाे खुल्यो यस्तो रहस्य, यस्तो रहेछ वास्तविक कुरो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > पर्सा गोलीकाण्डकाे खुल्यो यस्तो रहस्य, यस्तो रहेछ वास्तविक कुरो!
पर्सा गोलीकाण्डकाे खुल्यो यस्तो रहस्य, यस्तो रहेछ वास्तविक कुरो!
admin May 7, 2018 समाचार 0
र्सा, २४ वैशाख । पक्राउ गरिएका अभियुक्तलाई छुटाउन प्रहरी चौकी सेढवामा स्थानीयवासीले आक्रमण गर्दा चारजना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् । अभियुक्तलाई छुटाउन स्थानीय बासिन्दाले आज बिहान करीब ३ बजे प्रहरी चौकी सेढवानमा आक्रमण गर्दा तीनजना प्रहरी सहायक निरीक्षक र एकजना प्रहरी जवान घाइते भएका हुन् । घाइते चारैजनाको वीरगञ्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
घाइते हुनेमा प्रहरी सहायक निरीक्षकहरु गोपाल खड्का, सुकेश्वर महतो र शम्भु महतो तथा प्रहरी जवान जयप्रकाश यादव रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन लिम्बूले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, चोरीको अभियोगमा सुवर्णपुरबाट पक्राउ गरिएका दुईजना अभियुक्तलाई समेत सोही चौकीमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । चौकीमा रहेका छजना अभियुक्तलाई छुटाउन ढुङ्गामुडा तथा आगजनी गरिएको हो । रासस
बिहानै अायो दुःखद खबरः भरतपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुदा २ जनाकै मृत्यु
सभामुख महरापुत्र ले गरे राज्यको सम्पती बिराटनगर जुट्मिल कब्जा …पूरा हेरेर सक्दो शेयर गर्नुहोस
आफ्नी पत्नीसँग अ’नैतिक सम्बध राखेको भन्दै सन्तोषको गरे ह’त्या !
इमान्दार ट्याक्सी चालक ! जसले फर्काए यात्रुको छुटेको साढे ३ लाखको सुनको सामान
प्रधानमन्त्री ओली ज्यू! राम्रो काम गर्छु भन्दा भन्दै फेरि चिप्लिनुभयो